နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံး ကြားနာပွဲကို တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ဘယ်လောက်ထိညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အခြေအနေမှန်တွေကို သူကိုယ်တိုင် သိရှိနားလည်လာဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဗွီအိုအေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လည်း ICJ တရားရုံးကို တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ တွေအပေါ် မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကို ချက်ခြင်းရပ်တန့်ရေး ဂမ်ဘီယာရဲ့လျောက်လှဲ ချက်ကို ဒီကနေ့ အင်္ဂါနေ့ ICJ တရားရုံးမှာ စတင်မယ့် ကြားနာမယ့်ပွဲအတွက် နယ်သာလန် နိုင်ငံ the Hague ကို ကမ္ဘာတလွှားက ထောက်ခံသူတွေ၊ ကန့်ကွက်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းတွေ စုဝေးရောက်ရှိနေပါတယ်။ မအင်ကြင်းနိုင်က အပြည့်အစုံကို ဆက်လက်တင်ပြမှာပါ။
လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတားဆီးရေးနဲ့ အပြစ်ပေးရေး နိုင်ငံတကာသဘောတူ စာချုပ်ချိုးဖောက်မှုနဲ့ ဂမ်ဘီယာက မြန်မာကို ICJ နိုင်ငံတကာ တရားရုံးမှာ စွဲတင်ထားတဲ့အမှုအတွက် လောလောဆယ် ကြားကာလမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အခြေအနေ ပိုပြီး ဆိုးမလာစေအောင် ကာကွယ်ပေးရေး “Provisional Measure of Protection” ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်များ ရက်တိုအတွင်း ချမှတ်ပေးဖို့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ လျောက်ထားချက်ကို ဒီကနေ့ ICJ ကုလသမဂ္ဂအမြင့်ဆုံးတရားရုံးက စတင်ကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်အပြန်အလှန်လျောက်ထားချက်တွေကို သုံးရက်ကြာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ထိ ICJ တရားသူကြီး တွေက ကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် ICJ တရားသူကြီး ၁၅ ဦးရှိပေမယ့် ဒီကြားနာပွဲအတွက် ဂမ်ဘီယာဘက်က အဆိုပြုတဲ့ တရားသူကြီးတဦးနဲ့ မြန်မာဘက်က အဆိုပြုတဲ့ တရားသူကြီး တဦး စုစုပေါင်း ၁၇ ဦး က ကြားနာမှာပါ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီအမှုစွဲချက်ထဲမှာ ပါဝင်ခြင်းမရှိပေမယ့် တရားရုံးဖြစ်စဉ်မှာ လိုအပ်ရင် အချက်အလက်တွေ ပံပိုးကူညီဖို့ အစိုးရအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လည်း နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague ကိုသွားရောက်မှာဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Dr A.K. Abdul Momen က ဗွီအိုအေကိုအခုလို ပြောပါတယ်။
“ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအနေနဲ့ အမှုစွဲချက်ထဲမှာ မပါဝင်ပေမဲ့လည်း တရားရုံး ကြားနာမယ့်အစီစဉ်မှာ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် အချက်အလက်၊ အစီရင်ခံစာတွေကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ICJ တရားရုံးကို သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု အတွက် အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါအပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကို မဟုတ်မှန်တဲ့ သတင်းတွေ၊ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေ၊ အတုအယောင် သတင်းတွေထုတ်ပြန်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာဘက်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အခု ICJ တရားရုံးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ အခုလို ကြားနာပွဲကို သူ့ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် အခြေအနေမှန်ကိုသိရှိပြီး အမှန်တရားကို နားလည်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။”
အခုလို မြန်မာကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုစွဲချက်နဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးမှာ ဂမ်ဘီယာက အမှုစွဲတင်တဲ့ ကိစ္စဟာ နိုင်ငံတော် အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယ်တိုင် ခုခံချေတာဟာ မှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသမှုကို ထောက်ခံကြောင်း ပြသဖို့ ဥရောပတ၀န်းမှာရှိနေတဲ့ မြန်မာမိသားစုတွေကလည်း ICJ တရားရုံးရှိရာ the Hague ကိုရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ထောက်ခံကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲ အစီအစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဦးဆောင် စီစဉ်သူတဦးဖြစ်တဲ့ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ ကိုမိုးကျော် က ဗွီအိုအေကို အခုလိုပြောပါတယ်။
“ရောက်လာတဲ့သူတွေကို ကျနော်တို့အနေနဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်လေးတွေပေါ့နော် ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာ လိုက်နာမယ့် စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ပြီးမြောက်အောင် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်း ရှိတာကို ၊ ရှိတော့ ကျနော်တို့က တဖက်နဲ့ တဖက် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့နော် ၊ စည်းကမ်းချက်တွေထုတ်ပြီးတော့ သူတို့ကို လက်ကမ်းစာစောင်လေးတွေပေးမယ်။ ပြီးရင် ကျနော်တို့ ဒေါ်စုလာတဲ့အချိန် ကျနော်တို့အားလုံးက ‘အမေစု ကျမ်းမာပါစေ၊ အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ ၊ အောင်မြင်ပါစေ’ စသဖြင့်ပေါ့ ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ ဆုတောင်းပြီးတော့ သူ လျောက်လှဲချက်ပေးဖို့ အထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့တွေက သတင်းဌာနတွေနဲ့ အင်တာဗျူးတာတွေ လုပ်မယ်။ Documentary ရိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ ပြောချင်တဲ့လူကလည်း ပြောကြမှာပေါ့လေ။ ကျနော်တို့မှာလည်း သီးခြား Documentary ရိုက်မယ့်အဖွဲ့တွေ ရှိတာပေါ့နော် အင်္ဂလန်က အုပ်စုတွေပေါ့။ နောက်တနေ့ကျတော့လည်း ၁၂ ရက်နေ့ကျတော့ အဲလိုပဲ ၄ နာရီခွဲမှာ စမယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့က ၃ နာရီလောက်ကတည်းက ကြိုပြီးတော့ အားလုံးရောက်နေဖို့အတွက်ကို အသင့်ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်၊ လုံခြုံရေးရော ပေါ့နော်။”
အခြားတဖက်မှာတော့ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် တရားမျှတမှုရဖို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးက ကိုင်တွယ်ကြားနာမယ့်ကိစ္စကို ထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်း the Hague ကိုရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ကြားနာပွဲကိုတက်ရောက်မယ့် Rohingya Action Ireland အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Stephanie McDermott က ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။
“နာကြည်းမှုတွေကို ခံစားခဲ့ရသူတွေအတွက် ထောက်ခံဖို့ လူ ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေ ရောက်ရှိနေကြပါတယ်လို့ ပြောသွားတာပါ။”
ICJ တရားရုံးက နိုင်ငံတွေ အငြင်းပွားမှုပြဿနာကို ကြားနာဖြေရှင်းရာမှာ အခုလို နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်တဦး အနေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတာဟာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေက ဖေါ်ပြကြပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် ဒီကနေ့ပြုလုပ်မယ့် အများပြည်သူရှေ့ ကြားနာပွဲမှာ အရင်ဆုံးထွက်ဆိုမယ့် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကိုယ်စား တရားရေးဝန်ကြီး Abubacarr Tambdou က အဖွင့်လျှောက်လှဲချက်ကို တင်ပြမှာပါ။ မနက်ဖြန် ဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့ မှာပြုလုပ်မယ့် ကြားနာပွဲအတွက် မြန်မာဘက်က ခုခံချေပရာမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့ အဖွင့်လျောက်လှဲချက် တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ICJ ကွားနာပှဲကို ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ အဆငျ့မွငျ့ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့တကျမညျ
နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုယျတိုငျ ICJ တရားရုံး ကွားနာပှဲကို တကျရောကျခွငျးအားဖွငျ့ ရိုဟငျဂြာတှအေပျေါ ဘယျလောကျထိညှငျးပနျးနှိပျစကျခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အခွအေနမှေနျတှကေို သူကိုယျတိုငျ သိရှိနားလညျလာဖို့ မြှျောလငျ့ကွောငျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးက ဗှီအိုအကေို ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ အစိုးရအဆငျ့မွငျ့ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့လညျး ICJ တရားရုံးကို တကျရောကျမှာဖွဈပါတယျ။
ရိုဟငျဂြာတှအေပျေါ မွနျမာအစိုးရရဲ့ ဖိနှိပျမှုတှကေို ခကျြခွငျးရပျတနျ့ရေး ဂမျဘီယာရဲ့လြောကျလှဲ ခကျြကို ဒီကနေ့ အင်ျဂါနေ့ ICJ တရားရုံးမှာ စတငျမယျ့ ကွားနာမယျ့ပှဲအတှကျ နယျသာလနျ နိုငျငံ the Hague ကို ကမ်ဘာတလှားက ထောကျခံသူတှေ၊ ကနျ့ကှကျသူတှနေဲ့ နိုငျငံတကာသတငျးမီဒီယာ အဖှဲ့အစညျးတှေ စုဝေးရောကျရှိနပေါတယျ။ မအငျကွငျးနိုငျက အပွညျ့အစုံကို ဆကျလကျတငျပွမှာပါ။
လူမြိုးတုနျးသတျဖွတျမှုတားဆီးရေးနဲ့ အပွဈပေးရေး နိုငျငံတကာသဘောတူ စာခြုပျခြိုးဖောကျမှုနဲ့ ဂမျဘီယာက မွနျမာကို ICJ နိုငျငံတကာ တရားရုံးမှာ စှဲတငျထားတဲ့အမှုအတှကျ လောလောဆယျ ကွားကာလမှာ မွနျမာနိုငျငံက ရိုဟငျဂြာတှရေဲ့ အခွအေနေ ပိုပွီး ဆိုးမလာစအေောငျ ကာကှယျပေးရေး “Provisional Measure of Protection” ကွားဖွတျစီမံဆောငျရှကျခကျြမြား ရကျတိုအတှငျး ခမြှတျပေးဖို့ ဂမျဘီယာနိုငျငံရဲ့ လြောကျထားခကျြကို ဒီကနေ့ ICJ ကုလသမဂ်ဂအမွငျ့ဆုံးတရားရုံးက စတငျကွားနာမှာဖွဈပါတယျ။ နှဈဘကျအပွနျအလှနျလြောကျထားခကျြတှကေို သုံးရကျကွာ ဒီဇငျဘာလ ၁၂ ရကျနထေိ့ ICJ တရားသူကွီး တှကေ ကွားနာမှာဖွဈပါတယျ။ ပုံမှနျ ICJ တရားသူကွီး ၁၅ ဦးရှိပမေယျ့ ဒီကွားနာပှဲအတှကျ ဂမျဘီယာဘကျက အဆိုပွုတဲ့ တရားသူကွီးတဦးနဲ့ မွနျမာဘကျက အဆိုပွုတဲ့ တရားသူကွီး တဦး စုစုပေါငျး ၁၇ ဦး က ကွားနာမှာပါ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံအနနေဲ့ ဒီအမှုစှဲခကျြထဲမှာ ပါဝငျခွငျးမရှိပမေယျ့ တရားရုံးဖွဈစဉျမှာ လိုအပျရငျ အခကျြအလကျတှေ ပံပိုးကူညီဖို့ အစိုးရအဆငျ့မွငျ့ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့လညျး နယျသာလနျနိုငျငံ The Hague ကိုသှားရောကျမှာဖွဈကွောငျး ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Dr A.K. Abdul Momen က ဗှီအိုအကေိုအခုလို ပွောပါတယျ။
“ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံအနနေဲ့ အမှုစှဲခကျြထဲမှာ မပါဝငျပမေဲ့လညျး တရားရုံး ကွားနာမယျ့အစီစဉျမှာ လိုအပျမယျဆိုရငျ အခကျြအလကျ၊ အစီရငျခံစာတှကေို ပံ့ပိုးပေးနိုငျဖို့ အဆငျ့မွငျ့ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ ICJ တရားရုံးကို သှားရောကျမှာဖွဈပါတယျ။ လူမြိုးတုံး သတျဖွတျမှု အတှကျ အရေးယူအပွဈပေးနိုငျဖို့ နိုငျငံတိုငျးမှာ တာဝနျရှိပါတယျ။ ဒါအပွငျ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးက ရိုဟငျဂြာတှအေပျေါ ဘာတှဖွေဈခဲ့သလဲဆိုတဲ့အခွအေနကေို မဟုတျမှနျတဲ့ သတငျးတှေ၊ လုပျကွံဇာတျလမျးတှေ၊ အတုအယောငျ သတငျးတှထေုတျပွနျမှုနဲ့ ပတျသကျလို့ မွနျမာဘကျမှာ တာဝနျရှိပါတယျ။ အခု ICJ တရားရုံးမှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးတဲ့နရောမှာ သူ့ရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာ ထိခိုကျတဲ့အတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈမိပါတယျ။ အခုလို ကွားနာပှဲကို သူ့ကိုယျတိုငျတကျရောကျခွငျးအားဖွငျ့ အခွအေနမှေနျကိုသိရှိပွီး အမှနျတရားကို နားလညျလာလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။”
အခုလို မွနျမာကို လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုစှဲခကျြနဲ့ ကမ်ဘာ့အမွငျ့ဆုံးတရားရုံးမှာ ဂမျဘီယာက အမှုစှဲတငျတဲ့ ကိစ်စဟာ နိုငျငံတျော အကြိုးစီးပှားကို ထိခိုကျစတေဲ့အတှကျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ယျတိုငျ ခုခံခတြောဟာ မှနျကနျကွောငျးနဲ့ ခေါငျးဆောငျကောငျးပီသမှုကို ထောကျခံကွောငျး ပွသဖို့ ဥရောပတဝနျးမှာရှိနတေဲ့ မွနျမာမိသားစုတှကေလညျး ICJ တရားရုံးရှိရာ the Hague ကိုရောကျရှိနကွေပါတယျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ပုဂ်ဂိုလျရေးအရ ထောကျခံကွောငျး ဆန်ဒပွပှဲ အစီအစဉျတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ ဦးဆောငျ စီစဉျသူတဦးဖွဈတဲ့ နယျသာလနျနိုငျငံမှာ နထေိုငျတဲ့ ကိုမိုးကြျော က ဗှီအိုအကေို အခုလိုပွောပါတယျ။
“ရောကျလာတဲ့သူတှကေို ကနြျောတို့အနနေဲ့ လကျကမျးစာစောငျလေးတှပေေါ့နျော ဒီဆန်ဒပွပှဲမှာ လိုကျနာမယျ့ စညျးကမျးခကျြတှနေဲ့ ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြးနဲ့ ပွီးမွောကျအောငျ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဆနျ့ကငျြတဲ့အဖှဲ့တှလေညျး ရှိတာကို ၊ ရှိတော့ ကနြျောတို့က တဖကျနဲ့ တဖကျ ခိုကျရနျဖွဈပှားမှုတှမေဖွဈအောငျပေါ့နျော ၊ စညျးကမျးခကျြတှထေုတျပွီးတော့ သူတို့ကို လကျကမျးစာစောငျလေးတှပေေးမယျ။ ပွီးရငျ ကနြျောတို့ ဒျေါစုလာတဲ့အခြိနျ ကနြျောတို့အားလုံးက ‘အမစေု ကမျြးမာပါစေ၊ အသကျရာကြျောရှညျပါစေ ၊ အောငျမွငျပါစေ’ စသဖွငျ့ပေါ့ ကွှေးကွျောသံတှနေဲ့ ဆုတောငျးပွီးတော့ သူ လြောကျလှဲခကျြပေးဖို့ အထဲဝငျသှားတဲ့အခြိနျမှာ ကနြျောတို့တှကေ သတငျးဌာနတှနေဲ့ အငျတာဗြူးတာတှေ လုပျမယျ။ Documentary ရိုကျတဲ့အဖှဲ့တှနေဲ့ ပွောခငျြတဲ့လူကလညျး ပွောကွမှာပေါ့လေ။ ကနြျောတို့မှာလညျး သီးခွား Documentary ရိုကျမယျ့အဖှဲ့တှေ ရှိတာပေါ့နျော အင်ျဂလနျက အုပျစုတှပေေါ့။ နောကျတနကေ့တြော့လညျး ၁၂ ရကျနကေ့တြော့ အဲလိုပဲ ၄ နာရီခှဲမှာ စမယျဆိုတော့ ကနြျောတို့က ၃ နာရီလောကျကတညျးက ကွိုပွီးတော့ အားလုံးရောကျနဖေို့အတှကျကို အသငျ့ပွငျဆငျထားတာပေါ့နျော၊ လုံခွုံရေးရော ပေါ့နျော။”
အခွားတဖကျမှာတော့ ဆယျစုနှဈပေါငျးမြားစှာကွာအောငျ ညှငျးပနျးနှိပျစကျခံခဲ့ရတဲ့ ရိုဟငျဂြာအသိုငျးအဝိုငျးအတှကျ တရားမြှတမှုရဖို့ ပထမဆုံးအကွိမျ ကမ်ဘာ့အမွငျ့ဆုံးတရားရုံးက ကိုငျတှယျကွားနာမယျ့ကိစ်စကို ထောကျခံတဲ့ နိုငျငံတကာအဖှဲ့အစညျးတှလေညျး the Hague ကိုရောကျရှိနကွေပါတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျလို့ ကွားနာပှဲကိုတကျရောကျမယျ့ Rohingya Action Ireland အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ Stephanie McDermott က ဗှီအိုအကေိုပွောပါတယျ။
“နာကွညျးမှုတှကေို ခံစားခဲ့ရသူတှအေတှကျ ထောကျခံဖို့ လူ ပုဂ်ဂိုလျအဖှဲ့အစညျးတှေ ရောကျရှိနကွေပါတယျလို့ ပွောသှားတာပါ။”
ICJ တရားရုံးက နိုငျငံတှေ အငွငျးပှားမှုပွဿနာကို ကွားနာဖွရှေငျးရာမှာ အခုလို နိုငျငံတနိုငျငံရဲ့ အမွငျ့ဆုံးခေါငျးဆောငျတဦး အနနေဲ့ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးတာဟာ ပထမဦးဆုံးအကွိမျဖွဈတယျလို့ နိုငျငံတကာသတငျးမီဒီယာတှကေ ဖျေါပွကွပါတယျ။
ဒီဇငျဘာလ ၁၀ ရကျ ဒီကနပွေု့လုပျမယျ့ အမြားပွညျသူရှေ့ ကွားနာပှဲမှာ အရငျဆုံးထှကျဆိုမယျ့ ဂမျဘီယာနိုငျငံကိုယျစား တရားရေးဝနျကွီး Abubacarr Tambdou က အဖှငျ့လြှောကျလှဲခကျြကို တငျပွမှာပါ။ မနကျဖွနျ ဒီဇငျဘာလ (၁၁)ရကျနေ့ မှာပွုလုပျမယျ့ ကွားနာပှဲအတှကျ မွနျမာဘကျက ခုခံခပြေရာမှာ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအနနေဲ့ အဖှငျ့လြောကျလှဲခကျြ တငျပွမှာဖွဈပါတယျ။